Izidakamizwa psychotropic: zinhlobo
Esikhathini ekwelapheni izifo ezihambisana iziyaluyalu of psyche womuntu kanye nezinguquko, ufake iqembu olubanzi izidakamizwa ebizwa izidakamizwa psychotropic. Ngaphezu kwalokho imithi ethile, izindawo psychotropic enezinto eziningi izinto okungase ukushintsha ukwazi umuntu enempilo futhi kungukuthi kusetshenziswa imithi (utshwala, nezidakamizwa, hallucinogens).
izidakamizwa psychotropic: izindlela yesenzo
Lo mshini wezenzo kwezidakamizwa ezithinta psyche ahlukahlukene ngempela. Nanti iphuzu elisemqoka umphumela izidakamizwa psychotropic ku ishayela uhlelo ukudluliswa e izinzwa zobuchopho futhi ushintsho lokuhlushwa izinto ezithile - neurotransmitters (serotonin, Dopamine, bradykinin, endorphins et al.), Kanye izinguquko umzimba emazingeni ahlukene isimiso sezinzwa esiyinhloko.
izidakamizwa psychotropic: ngezigaba
Njenganoma iyiphi imithi, izidakamizwa ezithinta ingqondo, lahlukaniswa laba amaqembu amaningana. Kuye umphumela zonke izidakamizwa kwelashwa futhi psychotropic zihlukaniswe zibe:
izidakamizwa ukufukula isimiso sezinzwa esiyinhloko (nootropics);
sedatives futhi zinhlungu;
Ngekhulu XX, abanye bengqondo bekwenziwa imizamo ukuhlonza elinye iqembu - Psychedelic (ingqondo akhula), kodwa okwamanje lezi izinto ihlukaniswa njengoba hallucinogenic hhayi esetshenziswa kwezokwelapha (LSD, mescaline).
izidakamizwa psychotropic ukufukula isimiso sezinzwa esiyinhloko
Leli qembu isetshenziselwa izifo ukuthi ahambisana ukucindezeleka isimiso sezinzwa esiyinhloko ezifana unhlangothi-cerebral palsy, encephalitis viral, iziyaluyalu umzimba. Lezi zihlanganisa izidakamizwa "Piracetam," "Gamma-aminobutyric acid", "ginkgo biloba".
Sedatives futhi zinhlungu
Le mithi asetshenziselwa nokugula ngengqondo ephelezelwa imizwa yokukhathazeka, ngesikhathi excitability isigqugquzeli ngokomzwelo (valerian, uxhumano lokudlulisa usawoti ukulungiselela "Phenobarbital" ngemithamo emincane). Zinhlungu imiphumela abakhethayo ngaphezulu kuphela sphere ngokomzwelo (ukulungiselela "Sibazon", benzodiazepines).
Lezi amathuluzi akuvumela ukunciphisa bese ukuhlanekezela zezimpawu zesifo sokudangala (umuzwa usizi, ukuphelelwa ithemba, nokunganaki), okungase kube umphumela izizathu inhloso (ukugula ngengqondo ukuphila, izinkinga zansuku zonke) nokuphazamiseka engqondweni (kokuqala esiteji of bayasangana). Lezi zihlanganisa izidakamizwa "Amitriptyline", "glaucine", "Azafen", "Duloxetine".
Ummeleli ebalulekile kuleli qembu izidakamizwa psychotropic ingumuthi "Chlorpromazine", esetshenziselwa sengqondo (okuyize, ukuhhema ezibukwayo futhi sokuzwa, kukhuphuke excitation) ukhipha izimpawu ngengqondo. Lesi sidakamizwa liyasetshenziswa ukwelapha sokuphazamiseka kwengqondo.
Cishe bonke izidakamizwa psychotropic kukhona izinto ezinamandla kanye nokusetshenziswa ayilungile kungabangela ukuba umlutha kanye nokulutheka. Yingakho ihlukaniswa njengoba izidakamizwa nokuziphendulela esiqinile futhi iyatholakala kuphela kadokotela. Ngemva kokufunda i-encyclopedia, noma ucele udokotela wakho mayelana psychotropic izidakamizwa, uhlu zazo iyatholakala kuwo wonke umuntu, wena uzokwazi ukuthola ukuthi udinga imithi ukuthenga.
"Testogenon": ukubuyekezwa, analogs, imiyalelo, intengo kanye imiphumela (izithombe)
Lapho prednisolone imijovo?
Yabhalwa nini Yama-Olympic yokuqala? Ama-Olympic yokuqala eGreece. Eyokuqala Olympics Winter